Irish Whiskey Inqola Awards 2017 | Irish Whiskey .com
Stuart libuyekeza Teeling Brabazon 2 futhi Diageo sika Roe & Co. e Sonny Molloys Whisky Ibha Galway.
Lapho mina waklama Irish Whiskey Inqola, Ngangifuna ukuba kube reflection kweqiniso kobuhle kanye izindaba ezinhle e-Irish Whiskey futhi Irish Whiskey ukuvakasha. Ngezinye izikhathi abantu bayangibuza ukuthi kungani Kubonakala sengathi njalo ngihlaselwa ube nomdlandla whiskeys futhi zemicimbi ukuthi mina ubuyekeze? Kungani Angizange ukugxeka noma ukugqamisa imikhiqizo noma nemikhuba Irish Whiskey Umhlaba. Isizathu sisobala. Mina kuphela bhala “Izindaba Ezinhle” izindaba. Nasi isizathu.
Njengezinye Blogger likagologo abalobi, Nginelungelo ukumenywa eziningi nogologo ukuqalisa nezinye izenzakalo nogologo ahlobene zemicimbi. Lokhu okuhlangenwe nakho engeza olwazini lwami futhi ukwazi lokhu ezikhulayo evumela ukuba nginilobele mayelana futhi wabelane nakho yami kanye nemibono Kulabo kini ufunde namabhulogi yami izihloko. Abantu abaningi ukufunda izindaba ezinjalo ukuba nezivakashi futhi unolwazi ngalokho kuhle emhlabeni. Ngokwesibonelo, ake sithi wena nomngane wami abahlala edolobheni noma izwe ukuthi Angikaze ngaphambi. Lapho ngibiza wena iseluleko ngaphambi ngivakashela, I cha buza you lapho zokudlela ezimbi ngempela edolobheni lakho. Ngiyabuza iseluleko sakho phezu lawo ukuma-out, engavamile futhi kuwufanele ngokuvakashela. Yingakho ngiye kuphela bhala mayelana izindaba ezinhle lapha. Uma Angiyithandi a nogologo ethile, distillery, ibha noma indawo, Angazi ukugxeka kwabo. Angive ngingathandi ubhale ngawo. Uma ngithanda into, Ngithi kini lonke ngakho kubhulogi yami noma sihloko ukuze ngethemba, Nawe uzothola isabelo ithuba futhi esehlele ngokwakho. Ngingumfana Blogger likagologo umhlaziyi. Ngingubani mina engozini kokulimaza abanye lomuntu noma umsebenzi onzima ezinye distillery noma idumela ngenxa siqu okuthandwa yami siqu noma imicabango yabantu.
Futhi lokho futhi lokho Irish Whiskey Day imayelana. Usuku olulodwa (3rd Mashi) lapho sigubha konke kuhamba phambili e Whisky Irish ngokusebenzisa kwethu:
yonyaka Irish Whiskey Inqola Imiklomelo yethu sigubha yethu 20 engcono Whisky ukuvakasha zemicimbi e Ireland. I 2018 Irish Whiskey Inqola imiklomelo uzobe umemezele at 00.01 Amahora Irish Isikhathi sivuliwe 03 Mashi 18.
Irish yethu yonyaka Whisky Inqola “Golden Pooka Imiklomelo” I-Whisky yethu Irish Yonyaka kusuka ohwlini 5 entsha Irish Whiskey izinkulumo zikhululwe ngonyaka ikhalenda odlule igubha ubuhle kanye emisha.
Irish yethu Whisky Ibha Yonyaka ibona phezulu yethu beshaya Irish Whiskey Bar kusuka Irish Whiskey Inqola imiklomelo unyaka ngamunye.
I 2018 Irish Whiskey Inqola 2018 Whisky Irish Yonyaka olufingqiwe (alfabhethi).
Hyde Cha. 5 – 1860 Single Grain Burgundy Qeda
Thina Ezihlukaniswa Hyde Cha. 5 1860 Single Grain Burgundy Qeda njengendlela 2 Pooka Irish Whiskey
Hyde lokuqala befika endaweni Irish Whiskey yesehlakalo eminyakeni embalwa edlule neminikelo kokuqala emiphumeleni njengeSitatimende eziningi nezinye nogologo brand new on amasheya “ilungu langaphandle” distilled 10 nonyaka ubudala lwemithombo olulodwa Whisky Irish. Umlingo ekhethekile Hyde alethwe Irish Whiskey Umhlaba nokuthi usimise kahle ngaphandle ziqhathaniswa nezimbangi zazo kwaba indlela baqeda lwemithombo ezikushoyo elilodwa
ezihlukahlukene emahlathini ezahlukene kubandakanya rum emiphongolweni. I Hyde wethegi “Konke mayelana Izinkuni” wafika ngempela kuqhame lapho beqala innovating ne ukunambitheka kwezomshado, nalutho-ngendwangu okungukuthi Irish Single yokusanhlamvu. Lapha, ubuhlakani yigama umdlalo futhi kancane nakanjani ngaphezulu uma ungeza sekugcineni ukuze nokuvuthwa ekhona. Hyde elinamandla kodwa izibambe 1916 Green Ilebula Inkulumo kwaba yangempela yensimbi isibhakela e a igilavu ​​velvet futhi kwaba uyakufanelekela kakhulu futhi ezifanele (le 1916 ilebula kwakungelona isici!) owawina yethu 2016 Whisky Irish noMklomelo woNyaka. Hyde usubuyelé kulo nyaka nge Single Grain Burgundy Qeda. Iwayini cask nogologo yokuqedela umsebenzi obucayi. Kusiza lapha ukuze ungeze sekugcineni ngokwanele ukuthonya ukunambitheka, kodwa hhayi phezu ukupheka. Hyde baye baphumelela ukunambitheka ukuphelela ngale nkulumo emangalisa okuyinto cishe engilithandayo Single Grain Irish nezinye Whisky / Whisky.
Lambay Isiqhingi Iqoqwana Encane
Thina Ezihlukaniswa Lambay Whisky Iqoqwana Small njengendlela 2 Pooka Irish Whiskey
Lambay Whisky kuyinto umndeni eziphethwe sha encane okwakubekelwa buthule umkhankaso ngonyaka odlule Baring Umkhaya abanamakhamera Lambay Island. Izinkulumo ezimbili ezaqaliswa, batch lenhlanganisela encane lwemithombo olulodwa nokusanhlamvu olulodwa kanye lwemithombo engu eziyishumi ubudala olulodwa. Kuze kube manje, konke Kuzwakala kuyisixazululo esivikelekile kakhulu yokubeka uphawu umsebenzi. Lokho wena kuze bethola ukuthi Lambay abambisene umndeni Camus Cognac kusukela Ile de re ku oGwini oluseNtshonalanga ye France abadumile for esiqhingini balo obuvuthiwe co
gnacs igcwele flavour nokuhogela iodine nolwandle spray. Cabanga Camus njengoba Laphroaig zomhlaba Cognac. Camus ngizile ebhodini ukunikela nobuchwepheshe babo kanye nesipiliyoni amasu nokuvuthwa ugu kuhlanganise ezimanzi / manzi nokuvuthwa emiphongolweni ukukhiqiza kwalokho ezintsha ngempela ukuba Irish Whiskey Umhlaba. Kokubili batch olulodwa futhi lwemithombo olulodwa izinkulumo akhiqizwa nokuma okwamukelekayo wesithathu Irish Whiskey distillery ngaphambi kokuba kabusha casked e yokugcwalisa lokuqala Camus Cognac emiphongolweni. emiphongolweni ezikhethiwe of Lambay kukhona isandla zithunyelwa Lambay Island ingamakhilomitha ambalwa ukuya ngasogwini eDublin okwengeziwe liyakhula elidala itshe okuqinile, wave wadilika izakhiwo epulazini ogwini Lambay sika. Ngiye akhethiwe iqoqo elincane iminyaka kulo mncintiswano, njengoba ngicabanga ukuthi amathonya nogologo kukhona evelele lapha kuka phezu eziqine kakhudlwana lwemithombo olulodwa. Kwenziwa umzamo super yokuqala evela Lambay abaye wadala hhayi nje i-cognac ezintsha eseqedile inkulumo, kodwa futhi niche esisha ngokuphelele zasolwandle noma ebhishi wavuthwa nogologo kuya Whisky emakethe Irish. Iphuzu elilodwa ngaphezulu! sokubekisa Lambay sika, kophawu namakhasi omkhiqizo bangempela emuva indaba ubuye ngempela akhethekile ngempela unezela futhi kugxilise kuzo obumnandi isici uma uthatha ibhodlela.
Thina Ezihlukaniswa Roe & Co njengendlela 2 Pooka Irish Whiskey
Roe & Co kwaba yigama mlando Dublin Whisky brand abafe ukuphuma ngawo-1940. Izakhiwo distillery ku Thomas Street Dublin ke wawela ezandleni Guinness manje is owned by Diageo. Maphakathi nawo-1800, George Roe and Co kwaba enye yezindawo ezinkulu kakhulu nogologo Distilleries eDublin wayengomunye futhi ukuthutha ngempumelelo kakhulu Whisky Irish USA. Diageo ewumlutha Whisky Irish ngaphezu kwezinsuku zokugcina 30 emva kweminyaka bazitholela Bushmills kusukela Irish Distillers. Lokhu kwaba umshado hhayi uthando nalapho Bushmills wajoyina
Mexican Tequila nzile Jose cuervo eminyakeni embalwa edlule, Diageo zase ziphinde aphume Irish Whiskey Umhlaba. Kodwa manje bangibonile wavusa Roe & brand Co futhi ekwakheni distillery entsha ngesizathu original Roe and Co izakhiwo, namanje kuphawulwa yisakhiwo sodumo St Patrick sika (wokudonsa) Tower enhliziyweni Guinness eyinkimbinkimbi nenkululeko Dublin sika. Njengoba babengekho umcimbi esemthethweni kwethulwa, Nginambithe Roe wami wokuqala & Co eceleni Teeling Brabazon 2 ngenkathi evakashele Sonny Molloys Whisky Ibha e Galway September odlule (Bona Isithombe ngenhla). eqinisweni, Bengingakulindele okuningi. Ngemva kwakho konke, lokhu kufanele kube “ubambe” whiskey ngoba abantu abavela ezizweni ezihlukahlukene omkhulu kuze distillery yangempela yakhiwe futhi lusebenze ezinkulu eminyakeni ezayo. Mina wayelindele ezingeni entry Pooka Omunye “ezinkampani” whiskey, eyanele ukuze uvikele isizinda sha kuze Izinto real kufika eminyakeni embalwa. kodwa, mfana kwaba mina okungalungile. Umuntu othile Diageo esebeké i lot esibi imicabango emisha Irish Whiskey umkhiqizo wabo. Umkhondo lokuqala 45% abv . Omunye amafishane 46% non obandayo isihlungi zone, ngakho isitatimende ngamabomu ngenhloso lapha. ukusetshenziswa eyinhloko yokugcwalisa lokuqala Bourbon emiphongolweni, ngakho eziningi ukhilimu, vanilla yezithelo izithelo. Lokho lena nogologo kakhulu fake olinganiselayo, kwaba sobala nakakhulu lapho ngikhuluma ungeze amanzi kancane. Thola it right futhi flavour ngempela ukuvula up. Kodwa nje iconsi noma amabili amanzi ngokweqile ayihlabe. Lokhu kuzakuba yisibonakaliso kundlu i lenhlanganisela aficionados kweqiniso. Ngangiwathanda akhuleka Tower ifa St Patrick sika ekuklanyweni ibhodlela. Ebusweni ketshezi egabheni nethusi blue sulphate ilebula tinged sihlanganise ukulingisa oxidised zethusi Dome of the umbhoshongo langempela. Wenze kahle Diageo. Roe & Co uyisibonelo esikhulu kanjani ezinkampani ezinkulu ezifana Diageo ungaphumelela lo mdlalo ngokuvumela abantu abawaziyo futhi obakhathalelayo nogologo ukusebenzisa umbukiso. A finalist efanelekayo indaba ethokozisayo ukubukela.
Thina Ezihlukaniswa Teeling Brabazon 2 njenge 3 Pooka Irish Whiskey
Teeling isishintshe kakhulu kusukela inqotshwe Whisky sokuqala ngqa yethu Irish uMklomelo Unyaka 2013 nge Teeling yabo Iqoqwana Encane – rum Qeda. Kusengenzeka omunye yami “njalo ukuthenga – Kumele Thenga” ehlane esiqhingini whiskeys nini I fly ngokusebenzisa Dublin Airport.
Njenganoma Roe & Co, ngenxa ukuzibophezela angaphandle, Ngayikhumbula kwethulwa entsha Teeling Distillery uma kuqala wavula futhi kwethulwa zombili lezi zinkulumo Brabazon. Ngineminyaka engu ekuvakasheni catch up kabusha
ukubuka distillery lwazo lokushumayela ngenye intambama ngokuba Irish Whiskey Inqola futhi ngathandaza isikhathi eside ku-e ngokuphatha isivakashi sawo ibha ukuze uhlole umkaki ka Brabazons. Kulaba Brabazon 1 kanye Brabazon 2, le 2 Kwangihlaba umxhwele ngempela lokho. Ngiye kakade wakhuluma ukusetshenziswa emiphongolweni ye kokuqeda ezifana rum newayini nendlela hlangothi olulodwa okusanhlamvu nogologo kungenzeka ngobumnene ukuthonywa yile emiphongolweni. Teeling kwadingeka yimpumelelo ekuseni kulo mkhakha kanye Wine yabo ulinganisela kahle California eseqedile Single yokusanhlamvu. Uma uthatha eyizingqabavu, egcwele enongiwe futhi kahle abaneminyaka engu lwemithombo olulodwa njengalezo ezihlinzekwa Teeling, inselele lapho kokuqeda indlela ukuze ugweme Ukungqubuzana flavour namathonya. Lokhu kuba bonke nzima uma ukuqeda lwemithombo eqinile olulodwa e Port Inqawe noma emiphongolweni lapho ukujula tannins we port kwenzeka evelele. Yini Teeling esesikwenzile lapha asivamile. Baye vatted ngobuciko 6 Imbobo ezahlukene abaneminyaka Teeling lwemithombo olulodwa amagama 49.5%. Ongacabanga ngisho mayelana nokudala nogologo lokhu eyinkimbinkimbi kufakazela once more ukuthi Teeling Uyi nogologo endlini ngempela akhethekile ashukumisayo. Amazinga ibhalansi kanye nokuphelela lokho bona baye baphumelela lapha uphawu Teeling Brabazon 2 njengendlela Classic nogologo esikhulu ngempela futhi esizayo Irish.
Walsh Whisky I Irishman Abasunguli Reserve Marsala Qeda
Thina Ezihlukaniswa I Irishman Abasunguli Reserve Marsala Qeda njengendlela 3 Pooka Irish Whiskey
2017 kuye kwaba elinye unyaka omuhle Walsh Whisky. Whisky yabo distillery futhi Isivakashi nakho konke up ngokugcwele futhi egijima futhi baye ayiqinise kokubili Irishman futhi Abalobi Tears brand ekhokhwayo Whisky emakethe Irish. A abalulekile Irish Whiskey emisha milestone okuhlale kunganakwa ukuthi sendalo Walsh Whisky incwadi yokuqala ngqa Single Embizeni Namanje – Single Malt Irish Whiskey imisindvo. Omunye izinkulumo engilithandayo iyona Irishman Abasunguli Reserve esinomthwalo ukunambitheka egcwele phama ka Single Malt ezihlangene kahle kwezintathawe eziphansi kwekhanzi okubabayo of Ireland Single Embizeni Namanje Whisky. Kanye Teeling Iqoqwana Encane, I Irishman Abasunguli Reserve yiyo nezinye ehlane siqhingi sami
Whisky Irish lapho sidlula Dublin Airport. Lapho uBernard Walsh wadala inkampani yakhe, yena asebenzisana ne umndeni Italian Reina abazikhiqizayo le Disaronno utshwala kanye naye siqu Cantine Florio lapho amnandi Marsala iwayini ngefaneleko mayelana 12 iminyaka nokuningi eSicily. Bernard wanquma ukuqedela i Irishman 12 nonyaka ubudala lwemithombo olulodwa kanye Irishman Abasunguli Reserve unyaka owodwa e Marsala Hogsheads futhi umphumela uye waba umbukwane. Ngiye olufushane le Abasunguli Reserve inkulumo njengoba Embizeni Single Namanje ithonya owenza umehluko kimi. Kunesinye isici wavuleka endaweni yabo phezu olufinqiwe. Ezinyangeni ezithile ezedlule, Walsh Whisky ongithumileyo yokunambitha amasampuli isampula 50ml yokukhuluma ngamunye. I kancane uhlakaniphile ngempela kwaba ukuthi wahlanganisa 50 ml isampula Marsala iwayini ukuze ungeze yokuqukethwe yokunambitha kanye nokubuyekeza yami. Simple, kodwa ukumaketha ngempumelelo futhi ukucabangela. Guys Wenze kahle! Ngokuthe gqo, Ngakwazi ireferensi futhi ukucinga ithonya Marsala e inkulumo ngayinye. I Irishman Abasunguli Reserve – Marsala Qeda is iphrojekthi emangalisayo evamile uguquko lwangempela siye okulindele Walsh Whisky.
Buyekeza… 00.01amahora. ku 3rd Mashi 2018 – Irish Whiskey Day.
I Winner of yethu Irish Whiskey Inqola 2017 Whisky Irish Yonyaka kuyinto Teeling Brabazon 2
I Winner of yethu Irish Whiskey Ibha ye Unyaka
Irish Whiskey Inqola
Whisky Irish Yonyaka
2013 Teeling Iqoqwana Small Rum Qeda
2014 Tullamore namazolo Phoenix
2015 Amandla amathathu Swallow Single Embizeni Namanje
2016 Hyde 1916 Grain Single
Irish Whiskey Ibha Yonyaka
2015 Dingle Whisky Ibha Dublin
2016 I Malt Lane / Folk House Kinsale